Pinfluencer: Suuqgeynta iyo Falanqaynta Laga Soo Bilaabo Pin ilaa Iibsasho | Martech Zone
Pinfluencer: Suuqgeynta iyo Falanqaynta Laga Bilaabo Pin ilaa Iibsasho
Jimco, Nofeembar 2, 2012 Isniin, Maarso 4, 2013 Douglas Karr
Shirkaduhu waxay heleen natiijooyin aan caadi ahayn oo la adeegsanayo Pinterest si ay u kobciyaan gaaritaankooda suuqgeynta. Sida barnaamij kasta oo bulsheed, Pinterest waxay leedahay hab dhaqankeeda suuqgeynta u gaarka ah, fursadaha ololaha iyo saamileyaasha.
Pinfluencer waa suuq geyn iyo Analytics madal isku dhafan bartaada Analytics inay ku siiyaan dib u soo celinta xogta maalgashiga. Waxay kaloo ku dareen wax cusub Barxadda kobcinta Pinterest taas oo awood kuu siineysa inaad ku martigeliso dallacsiinta Facebook, ka doorto noocyo badan oo tartan ah iyo raad-raac iyo dakhli.
Markuu adeegsade sawir ku dhejiyo guddiga Pinterest, waxay noqon kartaa wax kasta oo ka yimid muujinta fudud ee dhadhanka shakhsi ahaaneed iyo oggolaanshaha sheyga. Sabab kasta ha noqotee, ficilka ka dambeeya biinku wuxuu leeyahay astaamo badan oo waxtar u yeelan kara summad. Laakiin waxaan aaminsanahay tan ugu muhiimsani inay tahay: biinku wuxuu abuuraa waddada iibsiga. Blog Pinfluencer
Pinfluencer wuxuu bixiyaa sifooyinka soo socda:
Biinanka ugu sarreeya jaleeco - Pinfluencer wuxuu la socdaa Qalabkaaga ugu badan ee fayraska iyo soo jiidashada leh - labadaba boggaaga iyo boggagaaga. Eeg waxyaabaha ka soo baxa ee ugu badan iyo sida adduunku uga falcelinayo buuggaaga.
Guddiyada ugu Fiican - Pinfluencer wuxuu xisaabiyaa dhibcaha kaqeybgalka guddi kasta oo kaa caawinaya inaad ka jawaabto guddiyada ugu badan ee fayraska iyo kaqeyb galka ah waxayna kaa caawinayaan inaad go'aansato guddiyada aad diirada saareyso. Iyada oo hal jaleeco eeg pin-ka ugu caansan ee guddigaas.
Competition - Miyaad heleysaa biinano iyo musasallo ka badan tartankaaga? Keebaa ka mid ah alaabada tartameyaasha iyo looxyadu kuwa ugu caansan pinterest
Muujiyeyaasha Waxqabadka Muhiimka ah - Ku cabiro Kaqeybgalkaaga Brand Pinterest adoo adeegsanaya Biin / Maalin, Kuwa Raaca / Maalin. U adeegso cabirka fayraska ee 'Repins / Pin' iyo 'Clicks / Pin' si aad ugaxaysato hawlgelinta. Dakhliga / Bixinta khariidadaha dakhliga ka soo baxa biinanka.
Tags: pinfluencerPinterestfalanqaynta pinteresttartanka pinterestdallacaadda pinterest
Anatomy ee Suuqgeynta Fulinta
Xaqiiqooyinka Google - Raadinta Noolaha iyo Lacag bixinta
Nov 3, 2012 at 2: 56 AM
Waad ku mahadsan tahay tan, anigu runtii ma ihi taageere xiise leh laakiin miyay u qalantaa waddo dheer oo iib ah? Definitely Xaqiiqdii waan isku dayi doonaa tan.